Maitiro ekuita kuiswa kwakachena kweMacOS Yakakwira Sierra 10.13 | Ndinobva mac
Maitiro ekuita nyowani yekuisa ye macOS Yakakwira Sierra 10.13
Iwe unoda kuisa macOS High Sierra kubva pakutanga? Takatarisana neApple itsva yekushandisa maMacs uye kana tangoita kuti itorwe pakombuta yedu, mhando mbiri dzekumisikidza dzinogona kuitwa: iyo yatinoti Update uye iyo yatinoti yakachena kana kubva pakutanga.
Muzviitiko zvese izvi, mushandisi anosarudza yakanakisa sarudzo uye zviri pachena kuti zvese zvinoenderana nezvatinoita zuva nezuva nechikwata chedu, kana tikaunganidza mafomu mazhinji kana magwaro uye nevamwe. Imwe data yakakosha muzviitiko zvese izvi, kunyangwe isu tichigadzirisa kana kuisa kubva pakutanga, zvinosungirwa kugadzira kopi yekuchengetedza yeMac yedu muTime Machine kana zvimwewo, saka tichadzivirira kutemwa nemusoro kana chimwe chinhu chikatadza.
Ichokwadi ndechekuti mhando iyi yezvakakosha zvinogadzirirwa inokurudzirwa kuzviita kubva pakutanga kunyangwe hachisi chinhu chakakosha, ndiko kuti, Kana iwe usiri kuda kuisa macOS Sierra kubva pakutanga, ingo kurodha pasi kubva kuMac App Chitoro uye tinya pakuisa. Tinokurudzira kuti iwe ugoita kumisikidza kubva pakutanga kuti ubvise chero zvakasara zvisina kubviswa mashandisirwo, zvikanganiso kana chero chinhu chingakanganisa chiitiko neiyo nyowani vhezheni yeiyo system, enda kumberi izvo hazvisi zvekumanikidzwa, tinogona kugadzirisa nekuenda.
1 Kuiswa kubva pakatanga
2 Zvishandiso kugadzirisa
Kuiswa kubva pakatanga
Mune ino kesi, zvatichaita gore rino kuisa parutivi chishandiso chinotibatsira kugadzira bhuti disk kubva paUSB kana kunze dhisiki ine ingangoita 8 GB yekuchengetedza uye tichazviita kubva kuTerminal. Chinhu chekutanga chatichaita kuita download macOS High Sierra kubva kuApp Store, Kana kurodha pasi kwapera hatisi kuzoriisa, tichavhara iyo inosimudza nekudzvanya cmd + Q.
Kana kurodha pasi kwatanga isu tinogona kuenderera neiyo yekuisa maitiro kubva pakutanga uye zviri nyore kwazvo. Fomati uye utumidze zita rekuti USB ku tobva tavhura chiteshi uye isu tinoteedzera kodhi yacho iyo yatinosiya pano pazasi, inotibvunza isu password, isu tinopinda mairi uye toenderera.
sudo / Applications / Isa \_ macOS \_ High \_ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled-applicationpath / Applications / Install \_ macOS \_ High \_ Sierra.app
Takagadzirira, ikozvino isu takagadzira iyo inosimudza isu tinongofanirwa kumirira iyo nyowani macOS High Sierra kuti ikopisirwe muUSB. Kugadzira kuchaitwa otomatiki uye isu tinongofanirwa fomati yedu yemukati disk uko iko yekare sisitimu yekushandisa iri, ndiko kuti, macOS Sierra. Ipapo zvakapusa iine USB kana rekunze dhisiki rakabatana neMac, chatinofanira kuita boot nekudzvanya Alt uye gadza iyo nyowani macOS Yakakwira Sierra system.
Kana tichida isu tinogona kutsika iyo yekumisikidza kubva pakutanga, kungovandudza iyo Mac kubva kuMac App Store. Izvo zvainoita kuisa iyo system pamusoro pezvatinazvo uye kunyangwe chiri chokwadi kuti Apple haitidzivise kubva pakugadzira mhando iyi, kana tiine akawanda mafaera, kunyorera uye vamwe paMac, zvinogona nekufamba kwenguva kuita chimwe chinhu. zvimwe zvinononoka. Isu tinoziva zvakare vanhu vasati vamboita yakachena kana kukwenya kuisa paMacs avo uye havana kana matambudziko.
Chero zvazvingaitika, kumutsiridza iyo Mac kuri nyore uye isu tinongofanirwa kutevera iyo nhanho dzinoratidzwa neiyo macOS Yakakwira Sierra inosimudza. Tinogona kuona kuti zviri nyore kwazvo uye ndezvekupa: inotevera - inotevera - inotevera.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti backup mune aya kesi yakakoshawo, tinogona kutambura kusingatarisirwi kupera kwemagetsi kana kumwe kudzoka kunoparadza masikati uye kunyanya magwaro atinawo pakombuta, saka usati wabaya bhatani rekuvandudza Mushure mekurodha pasi, iri yakakosha kuita backup tichishandisa Time Machine kana chero chishandiso chatinoda. Kana iwe uine kusahadzika iwe unogona kushandisa chikamu chemashoko.
Chekupedzisira, ita pachena kuti kuiswa kubva pakutanga kunogona kunge kwakaomarara Kune avo vashandisi vasingazive maMacs kana avo vangotenga michina, saka chaizvo kana uchangobva kuva neMac hauna kunge wawana nguva yeku "kurodha crap" saka zviri nani kuti uvandudze zvakananga uye hauzove nedambudziko nazvo uye midziyo yako ichashanda zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuita nyowani yekuisa ye macOS Yakakwira Sierra 10.13
Mhoroi, ndine Imac kubva muna 2013 uye mushure mekumisikidza komputa uye kuyedza kudzoreredza OSx, iyo system inondiudza kuti Sierra haiwanike muApp Store ...
une iyo bootable USB yekumisa? une wifi inoshanda here?
Chero zvazvingaitika, kana iwe ukatevera nhanho, dzinofanirwa kukushandira, zvikasadaro unogona kugara uchidzorera kubva kuTime Machine backup.
Mhoroi, kana ndine Wi-Fi inoshanda asi ini handina USB ndakagadzira kana kopi muTime Machine… uye komputa yakatomisikidzwa….
Tarisa, isu tinogara tichinyevera nezve mabhakiti huh!
Edza kudzima Mac uye painotanga pinda Option-Command-R, wozo gadziridza kune yazvino vhezheni ye macOS inoenderana nekombuta yako.
Icho chokwadi ndechekuti ini ndine angu ese akakosha mafaera akachengeteka asi ini ndaida kudzoreredza OS kubva pakutanga ... ini ndakatevera nhanho kutanga neMirairo + R asi pakutsvaga App Store iyo OS yanga isisipo ... kana ndauya kuziva kuti izvi hazvaigona kuitika zvinoitika kwandiri kuti ndinyore chokwadi….
Zvakanaka ini ndaive nemubvunzo, ndine macbook pro 2012 uye ini ndaida kuisa kubva pakutanga, ndine maviri akaomarara madhiraivha, ssd yandinayo sisitimu nemaapplication akaiswa uye imwe HDD mandiri ini ndinofarira mifananidzo, mimhanzi uye nevamwe , ita kumisikidza kubva pakutanga, ma disks ese akacheneswa? Kana kuti chete iyo ssd yaizo fomatiwa?
Anodiwa, ingo fomata iyo SSD imwe yacho haina basa
Hi Borja, iwe unofanirwa kuumbiridza chete diski iyo paunenge uine OS, usabata iyo imwe.
Mhoroi zvakare, ndiri kuyedza kugadzira usb mune imwe mac ine sierra uye pandinonama mutsetse mutaraini inondiudza….
Iwe unofanirwa kudoma nzira yevhoriyamu.
Ndakaedza kanoverengeka ...
Uyu murairo ndewekugadzira iyo yekumisikidza ye macOS High Sierra, kwete ye macOS Sierra
Chokwadi mirairo yako haina kunaka, bvunza iyo vhoriyamu nzira
"Sudo / MaApplication / Isa \_ macOS \_ High \_ Sierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia -volume / Volumes / Untitled -applicationpath / Applications / Faka \_ macOS \_ High \_ Sierra.app"
Inotaridzika kunge glitch mune zvinyorwa kana uchinyora kodhi neruoko handizvo here?
Uye iwo murairo wakafanana mune zvese zviitiko
Muchokwadi ndakateedzera ndokunamira, iyo yandakaisa yatogadziriswa, ini ndatova neyangu yekuisa usb 😛 Tks!
Winston duran akadaro
Ndine iMac Late 2009, ndine macOS Sierra yakaiswa uye kana ndichiedza kugadzirisa kune macOS High Sierra, inokanda ini chikanganiso "Paive nekanganiso yekuongorora firmware"
pane chero mhinduro kudambudziko iri ???
Pindura Winston Duran
Winston mhoro, ita chekutanga rubatsiro cheki OS X kutanga uye tarisa yakakwira sierra yekuvandudza kana kurodha pasi zvakare. maererano
Ndakazviita uye ini ndakatonyora usb kuti ndiiise kubva pa0, asi kumisikidzwa hakupedze uye kunonditumira kudzosera sisitimu.
Zvinogona kunge kuti SSD (SanDisk) haienderane uye ndosaka iri kupa iko kukanganisa kana isinganditendere kuti ndiise?
Mavara pamberi pemirairo «vhoriyamu» haana kunaka; Zvinotaridza kuti ese mawebhusaiti akaikopa kubva kune imwechete isiriyo sosi. Kuti uigadzirise, bvisa dash yatovepo mumavara uye woitsiva nemadheshi maviri matsva. Unogona kushandisa zvinotevera:
sudo / Zvishandiso / Isa macOS Yakakwira Sierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia –volume / Vhoriyamu / Isina zita –applicationpath / Zvishandiso / Isa macOS Yakakwira Sierra.app
Kana zvasvika pakubvisa main disk (SSD) kubva kuDisk Utility, inofanirwa here AFPS kana macOS Plus (ine registry) kuiswa?
Kana iri SSD unogona kuisa AFPS kana macOS Plus, chero chaunoda
Faira manejimendi ine SSD inoti Apple inokurumidza uye zvirinani neAFPS
Manu mushure mekuverenga maforamu akati wandei inokurudzira kuisa macOS Plus (nekunyoresa) kana kumisikidza kwapera kana iwe ukatarisa hard drive yako inoonekwa neAfPS
Francisco Valenzuela-Rojas akadaro
Nezuro manheru ndakaburitsa usb drive kuburikidza nechiteshi, mupiro unokosheswa. Nekudaro, ini ndinofunga ini ndichamirira mazuva mashoma, nekuti kune zvirongwa zvisingashande pamwe neino nyowani yekuvandudza.
Pindura kuna Francisco Valenzuela Rojas
Ndakaona kuti vamwe vashandisi vane dambudziko rakafanana randiri kuunza izvozvi, ndakaedza kugadzirisa, asi zvinondipa iyo Firnware yekuongorora kukanganisa. Ini ndakarekodha USB kuti ndiite yekumisikidza 0, asi haina kuzopedzisa kuisa uye yakanditumira iyo yekudzorera skrini.
JESU NAYE akadaro
Izvo chaizvo zvakafanana zvinoitika kwandiri muna 2013 macpro ine 1tb owc ssd, ndakaedza kugadzirisa chete uye kana uye kubva pakutanga handina kubudirira kana ini ndakasiiwa pachiratidziro nefolda uye nemubvunzo mucheki mukati kupenya.
Pindura kunaJesu PAMWE CHETE
Mhoroi, pane yangu macbook pro kubva muna2012, yakaiswa yakakwira sierra kubva mukutanga muchikamu, zvinoitika kuti makiyi akati wandei haashande, kana kubva kuSierra hakuna dambudziko nekhibhodi, chero mazano? ndokutenda zvikuru
Kugona. Ini ndoda kurodha High Sierra kuti ndishandise yekunze ssd seyakanyanya dhisiki yeMac yangu. Icho chokwadi ndechekuti ini ndatova nacho chakaiswa, uye haizondirega ndichirodhaunirazve. Ndingaite sei kuti nditange maitiro ese gare gare?
Kana uchiisa Mac OS yakakwira Sierra, inozondibvunza icloud account, nekuti ini handina, zvinofungidzirwa kuti kana ndichiisa kubva pakutanga zvinoita sekunge ndanga ndazvitenga senge nyowani.
Mhoroi.Ndanga ndichi fomata sei macbook Pro asi panguva yekuiswa OS inogara pakati uye haichayiisa. Ndakaisiya kwemazuva kuti ndione kana yaishanda asi kwete. Zvakare chinja iro rakaoma dhiraivha kune rimwe randaive naro asi izvo hazvindibvumidze kana fomati Mac OS (ine rejista).
Ndine urombo nezve nyonganiso ... unoziva here kana paine dambudziko rekuisa kubva pakutanga pane partition yatove APFS? Ndatenda
pane iMAC kunonoka 2013, ndinogadzira iyo USB nezvose zvakanaka. Ini ndinotanga neALT, ndinosarudza iyo USB ... Uye mushure memaminetsi mashoma ini ndinowana dema skrini inoshanduka pakati pembeva nekhibhodi (uye isingazive mbeva)
Yakazara, ini handina kukwanisa ... Ipapo ini ndinotangazve COmand + Sarudzo + R ... uyezve kana ikatanga kushanda. Inondibvunza zvandiri kuda kuita, uye ini ndinoteedzera iyo SSD yekumisikidza kubva pakutanga. Nyaya iripo ndeyekuti SSD yatove nayo seAPFS ... Isa, asi ini ndinotarisa padanda uye pane zvakawanda zvikanganiso, kunyanya zvine chekuita neAFPS ... Yese, mushure memaminetsi gumi nemashanu inoti pane kukanganisa, uye haina kuisa chero chinhu.
Ndinoita chinhu chimwe chete zvakare, uye mhedzisiro yacho yakafanana; uye ini handikwanise kugadzirisa SSD kumaMacOs nerejista ... hazvibvumidze.
Mukupedzisira ndaifanira kupora kubva paInternet, uyezve TimeMachine ... uyezve, hapana chekuisa kubva pakutanga
Mhoro Miguel; Chinhu chekutanga chaunoverenga chinoitika kwandiriwo (ndinotofara kuti handisi ndega) uye neiyo iMac modhi (kunonoka 2013) uye zvakare neiyo SSD hard drive (mune yangu ndakaichinja paApple SAT uye ivo vakandiisira isiri yepamutemo imwe) (chii chisingazive mbeva mushure mekusarudza iyo USB yekumisikidza partition).
Ini ndakatovhura chat neApple SAT ndikapedzisira ndamuendesa kuSAT yemuviri (ndaive nemazuva matatu kusvika iyo Apple Care yapera); Mune imwe yezviitiko zviviri havana kuigadzirisa kana kuiwana sekukanganisa, saka ipapo ndinayo kumba, zvese zvinoshanda zvakakwana kunze kweiyo diki diki.
Paunenge uchimisa fomati ne Control-Alt-R Ini handichina dambudziko, nerombo rakanaka, gara uri muAPFS fomati.
Nekudaro, pane yangu 2016 macbook hapana zvakadaro zvinoitika uye zvese zvinoshanda zvakajairika; iMac yakazviitawo pasina matambudziko isati yasimudzira kuenda kuHigh Sierra neAPFS.
Kwaziso uye rombo rakanaka.
Mhoro zita rangu ndinonzi Antonio. Ndokumbira kuti uone kana uchikwanisa kundibatsira, ndinokutendai pamberi.
Ndine mac mini Yosemite ine Sierra yekushandisa system, ndaenda kunogadzirisa uye ndichiona kuti zvakatora nguva yakareba kuti zvidzime, ikozvino hazvizotanga.
Iva nekhibhodi iyo isiri apple iri yakajairwa Trust.
Ndine backups kune ekunze hard drive, asi handikwanise kuitakura kubva ku disk.
M. Jose akadaro
Mhoro, zita rangu ndinonzi M. José. Ini ndichangotenga MacBook Pro uye ini handizive kana ndichigona kuisa akamboshandiswa zvirongwa senge anodhirowa muimbi uye corel (ndinofunga inoshandisa imwe nzira yekushandisa). Kana zvichibvira ndinoda kuti iwe undiudze maitirwo azvo.
Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwenyu
Pindura kuna M. José
Shanduro dzese dzeMacOS dzine "kushomeka" kuri kutaurwa muHigh Sierra
Kubhadhara zvifambiso zvevoruzhinji muSingapore neApple Pay inogona kunge iri yechokwadi mu2018